git iyalela wonke umvavanyi kufuneka ayazi
Eyona Hamba Imiyalelo yeGit Wonke uMvavanyi kufuneka ayazi
Esi sithuba sisiPhepha sokukopela seGit kunye nemiyalelo eqhelekileyo ye-Git onokuyisebenzisa yonke imihla.
Ukuba ungumvavanyi wezobuchwephesha osebenza kunye nabaphuhlisi, kuya kufuneka uqhelane nemiyalelo esisiseko yeGit.
Esi sithuba siqulathe ulwazi olwaneleyo lweGit ukuze uhambe usuku nosuku njengeQA.
Ukuba awuyifakanga i-Git efakwe kumatshini wakho, unokulandela amanyathelo Uyifaka njani iGit kwiMac kwaye uvelise iiSSH Keys .
Ukuseta kuqala kweGit
Yenza i-git repo engenanto okanye uqalise kwakhona esele ikho
Yenza i-foo repo kulawulo olutsha olubizwa ngokuba yi-foo:
$ git clone https://github.com//foo.git foo
Uyenza njani iSebe elitsha kwi-Git
Xa ufuna ukusebenza kwinto entsha, wenza isebe elitsha eGit. Kananjalo, ngokubanzi ufuna ukuhlala ngaphandle kwesebe eliyintloko kwaye usebenze kumacandelo akho ukuze inkosi ihlale icocekile kwaye unokwenza amasebe amatsha kuyo.
Ukwenza ukusetyenziswa kwesebe elitsha:
Uluhlu luluhlu njani lwamasebe kwi-Git
Ukuba ufuna ukwazi ukuba ngawaphi amasebe akhoyo kulawulo lwakho olusebenzayo, sebenzisa:
develop my_feature master
Uwaguqula njani amasebe kwi-Git
Xa usenza isebe elitsha emva koko iGit itshintshela kwisebe elitsha ngokuzenzekelayo.
Ukuba unamasebe amaninzi, unokutshintsha ngokulula phakathi kwamasebe ngokuphuma kwe-git:
$ git checkout master $ git checkout develop $ git checkout my_feature
Ungawacima njani amasebe kwi-Git
Ukucima isebe lendawo:
Sebenzisa -D Iflegi yokukhetha ukuyinyanzela.
Ukucima isebe elikude kwimvelaphi:
Uyifaka njani i-git kwaye uvelise ii-SSH Keys kwi-Mac
Ukuya iqonga ifayile kukuyilungiselela ukuzibophelela. Xa usongeza okanye uguqula ezinye iifayile, kuya kufuneka ulungelelanise olo tshintsho 'kwindawo yokuma.' Cinga ngokubeka njengebhokisi apho ubeka khona izinto ngaphambi kokuyityhala phantsi kwebhedi yakho, apho ibhedi yakho yindawo yokugcina iibhokisi okhe wangena kuzo ngaphambili.
Iifayile zeGit Stage
Ukuya kwinqanaba okanye ukongeza iifayile, kuya kufuneka usebenzise git add command. Ungaqokelela iifayile ezizezinye:
$ git add foo.js
okanye zonke iifayile ngaxeshanye:
Utshintsho lweGit Unstage
Ukuba ufuna ukususa ifayile ethile eqongeni:
$ git reset HEAD foo.js
Okanye susa zonke iifayile ezihleliweyo:
Unokwenza i-alias yomyalelo kwaye uyisebenzise nge-Git:
$ git config --global alias.unstage 'reset HEAD' $ git unstage .
Ukuba ufuna ukubona ukuba zeziphi iifayile ezenziweyo, eziguqulweyo okanye ezicinyiweyo, imeko yeGit iya kukubonisa ingxelo.
Yindlela elungileyo ukuzibophelela rhoqo. Ungasoloko ugaqa phantsi ukwenza kwakho ngaphambi kokutyhala. Ngaphambi kokuba wenze utshintsho lwakho, kufuneka ulubeke kwinqanaba.
Umyalelo wokuzibophelela ufuna -m ukhetho oluchaza umyalezo wokuzibophelela.
Ungazenza iinguqu zakho ezinje:
$ git commit -m 'Updated README'
Lo myalelo ulandelayo uya kulungisa ukuzibophelela kwakho kutshanje kwaye ubeke olo tshintsho kwisiteji, ukuze ungalahli nawuphi na umsebenzi:
Ukucima ngokupheleleyo ukuzibophelela kunye nokulahla naluphi na utshintsho olusebenzayo:
Masithi unezibophelelo ezi-4, kodwa awukatyhaleli kwanto okwangoku kwaye ufuna ukubeka yonke into kwisibophelelo esinye, emva koko ungasebenzisa:
I HEAD~4 Ibhekisa kwizivumelwano ezine zokugqibela.
I -i ukhetho luvula ifayile yokubhaliweyo.
Uya kulibona igama 'khetha' ngasekhohlo kwesithembiso ngasinye. Shiya enye ephezulu yodwa kwaye ubeke endaweni yazo zonke ezinye ngo “s” zomngqusho, gcina kwaye uvale ifayile.
Emva koko enye iwindow esebenzayo iyavula apho unokuhlaziya khona imiyalezo yakho yokuzibophelela kumyalezo omnye wokuzibophelela.
Emva kokuba uwenzile utshintsho lwakho, okulandelayo kukutyhala kwindawo ekude.
Cofa isebe lendawo okokuqala ngqa:
$ git push --set-upstream origin
Emva koko, emva koko unokusebenzisa
Cofa isebe lasekhaya kwisebe elikude elahlukileyo
Ukutyhala isebe lendawo liye kwelinye isebe elikude, ungasebenzisa:
Hlehlisa Ukutyhala kokugqibela
Ukuba kuya kufuneka urhoxise ukutyhala kwakho kokugqibela, ungasebenzisa:
$ git reset --hard HEAD~1 && git push -f origin master
Xa usebenzisa git fetch, iGit ayidibanisi nezinye izenze kunye nesebe lakho langoku. Oku kuluncedo ngakumbi ukuba ufuna ukugcina indawo yokugcina izinto ihlaziyiwe, kodwa usebenza kwinto enokuthi yaphule xa uhlaziya iifayile zakho.
Ukudibanisa izithembiso kwisebe lakho eliyintloko, usebenzisa merge.
Landa utshintsho olusuka phezulu
Ukutsala kukwenza ukulanda okulandelwe kukudityaniswa. Xa usebenzisa git pull, iGit ngokuzenzekelayo idibanisa ezinye izinto ngaphandle kokukuvumela ukuba uzijonge kuqala. Ukuba awulawuli kakuhle amasebe akho, unokufumana ukungqubana rhoqo.
Ukuba une isebe elibizwa my_feature kwaye ufuna ukutsala elo sebe, ungasebenzisa:
$ git pull origin/my_feature
Tsala yonke into
Okanye, ukuba ufuna ukutsala yonke into kunye nawo onke amanye amasebe
Ukudityaniswa kweGit kunye nokuBuyisa kwakhona
Xa uqhuba git merge, isebe lakho le-HEAD liya kuvelisa ukuzibophelela okutsha , Ukugcina izinyanya kwimbali nganye yokuzibophelela.
Inkqubo ye- ukugqithisa Ubhala kwakhona utshintsho kwelinye isebe uye kwelinye ngaphandle ukudala ukuzibophelela okutsha.
Hlanganisa iSebe eliPhezulu ukuze ubonise iSebe
$ git checkout my_feature $ git merge master
Okanye ngokukhetha ukuphinda ukhethe, usebenzisa:
$ git checkout my_feature $ git rebase master
Hlanganisa iSebe leNqaku kwiCandelo eliPhezulu
$ git checkout master $ git merge my_feature
Ngamanye amaxesha wenza utshintsho kwisebe, kwaye ufuna ukutshintshela kwelinye isebe, kodwa awufuni kuphulukana notshintsho lwakho.
Ungalubamba utshintsho lwakho. Nantsi indlela oyenza ngayo i-stash kwi-Git:
Ngoku, ukuba ufuna ukungalususi olo tshintsho kwaye ubabuyisele kulawulo lwakho olusebenzayo:
Isamsung galaxy s21 umkhuseli wescreen
Uwujonga njani umjikelo webhetri ye-iphone
Nantsi into ekufuneka uyenzile ukuba iqhosha lamandla kwifowuni yakho ye-Android liyaphuka
I-LG V10 vs Apple iPhone 6s Plus: jonga kuqala
Enye ye-T-Mobile kunye neepos; esona sicwangciso sikhulu se5G sehlisiwe, kwaye (abanye) abathengi bacacile
Ungayibonisa njani Impendulo yeJSON usebenzisa iJMeter's JSON Extractor
Enye yezona zixhobo zekhamera ezigqwesileyo ze-Android ziba bhetele ngakumbi, kodwa ziiPixels zikaGoogle kunye neeapos
Cofa kabini ngokuVusa ngokutsala vs Ilizwi: ukuphonononga ezinye iindlela zokuvusa ifowuni
Esona sithethi siBalaseleyo seBluetooth seAmazon seSuku ngoku
Isamsung ityhila i-Galaxy S21 Ultra 5G nge-100X Space Zoom kunye nenkxaso ye-S Pen